Sikhuthazwa Unobumba uKumkani — UHAMBO LEE
Sikhuthazwa Unobumba uKumkani
Namhlanje sibhiyozela ilifa senkokeli abalaseleyo intshukumo Rights Civil, Dr. Martin Luther King Jr. UYehova asebenzisa le ndoda umfutho uhlanga, kwaye ushukumise abantu ukuya ukulingana. Kusekho umsebenzi ekufuneka wenziwe, kodwa ngegalelo lakhe elikhulu. Akukho hero igqibelele, noGqirha. Ukumkani wayexakekile, kodwa Ndimthanda kuye ngeendlela ezininzi kwaye mna iphefumlelwe ilifa lakhe. Nazi izinto ezintathu ngobomi bakhe ezikhuthaza kum.
1. Amkhanuke Justice
Dr. Ukumkani yokubandakanyeka kokusesikweni ukuba kuxhaphakile kwihlabathi lethu, kwaye wanikela ubomi bakhe ekulweni nayo. EBhayibhileni, wabona umbono kaThixo ihlabathi lakhe, Wabona abaprofeti ikhwelo ekupheleni kwingcinezelo, kwaye Yena ecenga ukubona ukuba ubulungisa kubakho. Ndiyabathanda le amkhanuke ubulungisa, ukhunge kuThixo kwakuza kuqhubeka ukuze bayixube entliziyweni yam. Ndifuna ukulwa abacinezelwa nokushumayela iindaba ezimnandi amathemba.
Nangona ubutsha bakhe, Dr. iintetho esiprofeto lokumkani akhazimlayo nombono ocacileyo amsa zivela yinkokeli intshukumo. Akazange bahlale umva kukukhalaza, yena eqinisa wabaqhuba. Yena kwacaca oko acinga ukunceda abantu abamnyama sisiya phambili, Wayikhokela nabanye kwelo cala. Oku kwabangela uxhathiso ungasebenzisi zigalo dayo ukutshintsha eUnited States ngonaphakade. Sonke sinokufunda kule uhlobo lobunkokheli. Umbono uba kuphela xa nto utshate kubunkokeli. ubunkokheli wakhe wanceda umbono kwenzeka.
Kanjalo, alwe zange kuhlangatyezwane ngoncumo ne lamkela. Esichengeni ubomi bakhe lonke ixesha, wamatsha, wathetha, okanye ndakuqononondisa. Wayesazi esenza oko kuyingozi, kodwa waba nesibindi ukuze abeke ubomi bakhe kumgca abantu bakhe. Inkcaso awayejongene akazange kuvala umbono wakhe, okanye kuyinciphise ubunkokheli bakhe. Ziyakhunjuzwa kuphela isizathu wayesilwa. Ndiyathandaza ukuba iNkosi iza kusebenza andenze isibindi esingagunqiyo elimele bekumkani Lakhe kwaye ulwa uzuko lwakhe.
Ndiyathemba wena iphefumlelwe umzekelo wakhe kwakunye, Ndiyathemba uya kuhamba nam bemdumisa uThixo ngento iphunyezwa Dr. ukumkani.
Pstan26 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:28 mna • impendulo
for the love of Nigeria • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:29 mna • impendulo
Tamiehicks • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:30 mna • impendulo
Dan Smith • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:30 mna • impendulo